Kutaura Mumutauro Wevateereri Vako | Martech Zone
NeChishanu, Gumiguru 1, 2010 NeChishanu, Gumiguru 1, 2010 Douglas Karr
Izvo zvinokodzera chete kuti ndinyore tsamba nezve kutaurirana kugara mukamuri yemusangano muFrance. Nezuro manheru takadya chikafu chemanheru chakarongerwa 8PM nekambani pa Le Procope, yekudyira yekare kuParis (est 1686). Takanga tichifara - iyiresitorendi yaive nevatenzi vakaita saDanton, Voltaire, John Paul Jones, Benjamin Franklin naThomas Jefferson.
Tave nenguva yakaoma kuwana macab muParis (zvisingawanzoitika). Iwo macabbi anouya oenda pakunakira kwavo. Isu takamirira kwehafu yeawa kana zvakadaro kuhotera uye concierge ikatiudza kuti tiende kune iyo Taxi stand kukona kona. Kunze kwekona muFrance kwakanyanya kupfuura kupfuura kwakatenderedza kona muUnited States. Takafamba dzinenge hafu yekiromita tichidzika nemugwagwa kuenda kumharadzano nechitima cheTekisi. Uye ipapo takamira… imwe maminitsi makumi mana nemashanu. Panguva ino tanonoka kudya kwemanheru uye tanga tisati taenda zvakadaro!
Tekisi yedu yakazopedzisira yauya, mukadzi mudiki akanaka wechiFrench mukadzi ari pairi. Akabvunza zvine mutsindo kwataienda… "Le Procope" takapindura. MuchiFrench akakumbira kero. Ini ndange ndambotumira kero yacho kufoni yangu asi handina kuibatanidza saka ndanga ndisina chokwadi - kunze kwekuti iyoresitorendi yaive pasi neLouvre. Kwemaminetsi mashanu anotevera isu takatsvakwa nemanzwi andisina kumbonzwa kubvira mai vangu pavakavashevedzera (iye ari Quebecois) semwana mudiki. Mutyairi wetekisi aisheedzera nekujekesa kwakadaro, ndakakwanisa kuturikira…. “Maresitorendi mazhinji muParis”…. “Aifanirwa kunge vaine zvese zvavakabata mumusoro”…. Bill (bhizinesi shamwari) uye isu takagara takatsikitsira misoro yedu pasi, tichimhanyisa kukiya mune isina waya chiratidzo uye kuti tiwane kero.
Ndanetseka, ndakakumbira Bill kero. Anorangarira zvese… aifanira kurangarira izvi. Bill akanditarisa akashushikana zvekusazorora ndokutanga kudzokorora zvaaifunga kuti kero ndeye… muchiFrench. “Sei uchindiudza nechiFrench? Ingoiperetera !!!! ” Iye anozviperetera nechiFrench chitauro ... Ndiri kumuuraya. Panguva ino, isu tinotaridzika saAbbott naCostello vachirova matako edu nekutsamwa nemutyairi wechiFrench mutekisi mutyairi anenge hafu yesayizi yedu.
Mutyairi wedu wetekisi akananga panze! Aityaira achimhanya… achiridza mhere nekuchema chero mota kana munhu aifamba kupinda munzira yake. Patakazosvika pakati peParis, ini naBill takangogona kuseka. Ndakanhonga zvakawanda zvekutaura kwake… “ndarwara mumusoro”… “idya!” patakatanga kupinda nekubuda mumotokari.
Pakupedzisira, takasvika pamwoyo weParis.
Mutyairi wedu wetekisi aisaziva mugwagwa (aida nzira yekuyambuka), saka akatiburitsa ndokutiudza kuti tiutsvage. Panguva ino, isu tanga tichingotenda zvisingaite kuve mudhorobha, takachengeteka, uye taitoseka kupihwa matatrics atakangoona. Ndakamuudza kuti ndaimuda muFrench, uye akandifemera kiss ... takanga tiri munzira.
Kana saka takafunga.
Takafamba tichitenderera mudhorobha kweinotevera awa kana kudaro… ikozvino 2 maawa anonoka kudya kwemanheru. Panguva ino, isu takavimba kuti kambani yedu yakatanga kudya tisipo uye takasarudza kukanda tauro ndokutora kudya kwedu tega. Ndipo patakapfuura iyo Vadivelu Comedy Indiana muresitorendi… Bill neni taifanira kutora mifananidzo miviri.
Isu takakomberedza kona uye ipapo pamberi pedu paive neLe Procope mukubwinya kwayo kwese. Takakurumidza kupinda mukati uye mukadzi uya wekutarisira akatiudza kuti kambani yedu ichiripo! Isu takagovana kuseka kwakawanda apo isu tichidzokorora zviitiko zvemanheru. Kudya kwemanheru kwaishamisa, uye takaita shamwari nyowani.
Paiva nezvimwe zvidzidzo zvakadzidzwa, hazvo:
Kuti ugone kutaurirana zvinobudirira nevateereri vako, unofanirwa vanotaura mutauro wavo.
Kuti ugone kutaurirana zvinobudirira nevateereri vako, unofanirwa zvakare nzwisisa tsika yavo.
Kuti usvike kwauri kuenda, unofanirwa ziva chaizvo kuti kupi izvo - nedudziro yakawanda sezvinobvira.
Usarega! Zvinogona kutora iwe inopfuura imwe nzira yekuenda ikoko.
Iri rairo rinopfuura French neChirungu kana France neIndiana. Ndiwo maitiro atinofanira kutarisa kushambadza zvakare. Kuti tikwanise kutaura nemazvo, tinofanirwa kuziva kuti musika wedu uripi, kwatinoda kuti vave, tishandise nzira dzekufambisa zvakanaka izvo zvakasikwa kwavari, uye vataure nemutauro wavo - kwete wedu. Uye kana ukasabatanidza nzira yekutanga, ungatofanira kuyedza dzimwe nzira kuti meseji yako ipfuure.
Kana iwe uri kushamisika… takatora nzira yepasi pevhu kudzokera kuhotera. 🙂
Tags: nhoroondo yevatengidijitari rekushambadzira kudzidzafinch pezvitsigaIBM Yakangwara Commercekutsvagisa kwekushambadzirakuongorora kwekushambadziranet kuwedzera
Icho Chaicho Chikonzero Chekuhaya Yemagariro Midhiya Guru
Gumiguru 2, 2010 pa 9:58 AM
"Iko uko uko kamuri yemusangano, iwe waizofanira kugadzira imwe." - Voltaire Finn.